Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A August 2010 (3)
Q and A August 2010 (3)
1. အောက်နှုတ်ခမ်း အလယ်မှာ အဖု (အသားပို) ဖြစ်နေပါသည်။
2. တီဘီရောဂါဆေးကို အစမှ ပြန်သောက်ရပါသလား။
3. ကိုယ့်ရဲ့သွေးသား ဟုတ်-မဟုတ်ကို ဆေးပညာနဲ့ ဘယ်လို စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်နိုင်သလဲ။
4. သုတ်ရေကို အပြင်မှာ ထုတ်လိုက်ရင်ကော ကိုယ်ဝန် ရနိုင်ပါသလား။
5. လည်ပင်းက ဖြစ်တဲ့အကျိတ် ဘယ်နှစ်မျိုး ရှိပါသလဲ။
Q: ကျွန်တော်သည် အသက် ၃ဝ အရွယ် အမျိုးသားတစ်ယောက် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်၏ (ပါးစပ်) အောက်နှုတ်ခမ်း အလယ်မှာ ဆောင်းရာသီ နှုတ်ခမ်းကွဲရာမှစ၍ အမာရွတ်ဖြစ်လာချိန်တွင် သွားဖြင့်ကိုက်ခြင်း လက်ဖြင့်ခွာခြင်း လက်သည်းညှပ်ဖြင့် ညှပ်ခြင်း စသည်တို့ကြောင့် ယခုအခါ ငရုတ်ကောင်းစေ့နီးပါး အဖု (အသားပို) ဖြစ်နေပါသည်။ Vaseline chapped lips ဆေးများလိမ်းပေမယ့် ၄,၅ လခန့်ကြာပါပြီ မပျောက်ခင်ဗျာ၊ မည်သို့ ပြုလုပ်လျှင်ကောင်းမည်ကို ဖြေကြားပေးပါခင်ဗျာ။
A: မမြင်ရပေမဲ့ ပြောတာ ဖတ်ပြီး ပြန်ပြောပါရစေ။ အသားပိုလိုဖြစ်လာတာက ရောဂါတခုတော့ မဟုတ်ပါ။ ရေးပြထားတဲ့ အကြောင်းတွေကြောင့် ဖြစ်လာတာပါ။ ဆက်ပြီး ကလိနေရင် ဆက်ကြီးလာနိုင်တယ်။ ဒါလဲ ရောဂါမဟုတ်သေဘူး။
ဒါပေမဲ့ မျက်နှာမျာဖြစ်နေလို့ ကြည့်ရတာ အမေမွေးတဲ့အတိုင်း ဖြစ်မနေတာတော့ ပြင်ချင်ရင် ပြင်ဘို့လိုတယ်။ ပြင်ချင်ရင်ဆိုတာ လူတယောက်နဲ့ တယောက် မတူပါ။ ရုပ်ကို ပြစားရသူနဲ့ ရုပ်ကို ဂရုစိုက်စရာ မလိုသူတွေ မတူကြပါ။
အနာရွတ်တွေကိုလည်း ကြီးနေရင်၊ အရုပ်ဆိုးနေရင် ပြင်လို့ ရနိုင်သူတွေမှာ ရပါတယ်။ လူတိုင်းတော့ မရပါ။
မေးတဲ့သူမှာ Keloid အနာရွတ်သီးတဲ့ အလေ့အထ မရှိရင် ပြင်သင့်ပါတယ်။ Plastic surgery သဘော ပြင်တာကောင်းတယ်။ Plastic surgeon ဆီ သွားစရာတော့ မလိုပါ။ အတွေ့အကြုံရှိ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်နဲ့ လုပ်လို့ ရပါတယ်။ ထုံဆေးနဲ့သာ လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဘာဆေးမှ မလိမ်းစေချင်ပါ။ ထပ်သိချင်သေးရင် ပုံရိုက်ပြီး ပို့ပေးပါ။
Q: တီဘီရောဂါပိုးရှိနေ၍ ၆လ ဆေးသောက်နေရချိန်အတွင်း ရံဖန်ရံခါ ဘီယာ နှင့် ဆေးလိပ်သောက် မိပါက ဆေးကို အစမှ ပြန်သောက်ရပါသလား ခင်ဗျာ။
Aug 16, 2010 at 11:57 AM
A: အဲဒါနဲ့တော့ မလိုပါ။ ဆေးသာ ဆက်သောက်ပါ။ ကောင်းသွားမှာပါ။
Q: ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပါရစေဆရာ။ ကျွန်မအမျိုးသားက တခြား အမျိုးသမီး တစ်ယောက်နဲ့ မှားယွင်းခဲ့တယ်တဲ့။ ကျွန်မ မသိအောင် ထောက်ပံ့မှုတွေ လုပ်ပြီး၊ အဲဒီကလေးကို မွေးစေခဲ့တယ်။ အခု အမျိုးသားက အဲ့ဒီကလေးကို ကျွန်မတို့နဲ့အတူ ခေါ်ထားချင်နေပါတယ်။ ကျွန်မတို့မှာ ကလေးတစ်ယောက် ရှိပါတယ်ဆရာ။ ကိုယ့်ရဲ့သွေးသား ဟုတ်-မဟုတ်ကို ဆေးပညာနဲ့ ဘယ်လို စစ်ဆေးမှုတွေ ဘယ်နေရာမှာ လုပ်ရင် သေသေချာချာ သိနိုင်တယ်ဆိုတာ ဖြေကြားပေးပါအုံးဆရာ။
A: I am sorry to learn your delicate problem. But it happens.
Parental testing မှာ paternity test ဖခင်အစစ် ဟုတ်-မဟုတ် နဲ့ maternity test မိခင်အစစ်ဟုတ်-မဟုတ် ၂ မျိုး ရှိတယ်။ Genetic fingerprinting ခေါ်တယ်။ ခေတ်ပေါ် နည်းဖြစ်ပြီး အရင်က သုံးခဲ့ကြတဲ့ ABO Blood group typing နည်းနဲ့ တခြားနည်းတွေထက် စိတ်ချ-သေခြာတဲ့နည်း ဖြစ်တယ်။ DNA testing နည်းက နောက်ဆုံးပေါ်နည်းဖြစ်တယ်။ အိန္ဒိယမှာ Accredited Paternity Test တခုဟာ INR 10950 ကုန်ကျမယ်လို့ ကြောညာထားတယ်။
Q: မေးခွန်းလေးတစ်ခု မေးခွင့်ပြုပါခင်ဗျား။ ကွန်ဒုံး မသုံးမိဘဲ လိင်ဆက်ဆံပြီး သုတ်ရေကို အပြင်မှာ ထုတ်လိုက်ရင်ကော ကိုယ်ဝန် ရနိုင်ပါသလား ခင်ဗျား။
A: မိသားစုစီမံကိန်း နည်း အမျိုးမျိုးကို (သူများဆီမှာ) သုတေသန လုပ်ထားတယ်။ ယောက်ျား သားကြောဖြတ်နည်းက မအောင်မြင်မှု ဝ့ဝ၂-ဝ့၁% နဲ့ စိတ်ချရဆုံး၊ အမျိုးသမီး သားကြောဖြတ်နည်း = ဝ့၂%၊ အမျိုးသမီး စားဆေးနည်း = ဝ့၁%၊ ယောက်ျား ကွန်ဒွန်နည်း = ၁-၃%၊ အမျိုးသမီး (ဒိုင်ယာဖရမ်) နည်း = ၁-၆%၊ အမျိုးသမီး သုတ်ပိုးသေဆေးနည်း ၃%၊ အမျိုးသမီး ဟော်မုန်း ကပ်ခွါနည်း = ဝ့၂%၊ အမျိုးသမီး သားအိမ်ထဲ ပစ္စည်းထည့်နည်း IUCD = ဝ့၆-၁့၅%၊ ရက်ရှောင်နည်း = ၃%၊ ယောက်ျား သုတ်ရည် အပြင်ထုတ်နည်း = ၄%၊ ဘာမှ မသုံးရင် ၈၅% ကလေးရနိုင်တယ်။
Q: လည်ပင်းက ဖြစ်တဲ့အကျိတ် ဘယ်နှစ်မျိုး ရှိပါသလဲ။ လည်ပင်းက အကြောအတိုင်း တစ်လုံးပြီး တစ်လုံး တန်းစီပြီး ထွက်တဲ့ အကျိတ်က ဘယ်လို ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်စေတာလဲ။ ဆေးသောက်တာနဲ့ ပျောက်နိုင်ပါသလား။
Aug 16, 2010 at 4:03
A: ဖြစ်တဲ့သူရဲ့ အသက်၊ ကျား-မ၊ ဖြစ်တာ ဘယ်လောက်ကြာပြီ၊ တခြား ဘာလက္ခဏာတွေရှိတယ်။ ဥပမာ ဓါတ်မှန်၊ နာ-မနာ၊ လူပိန်လာ-မလာ၊ သိချင်ပါသေးတယ်။ မတူတာတွေ အမျိုးမျိုးရှိလို့ပါ။ တက်စေ့ ရောင်တာ၊ တီဘီ၊ ကင်ဆာ အတော် မတူတာတွေ။
Q: ဖြစ်တာက ညီမလေးတစ်ယောက်ပါ ဆရာ။ သူက နဂိုပိန်တာပါ။ သိပ်မကြာသေးဘူး ထင်တာပဲ။ သူကခုမှ ကိုယ်ကိုယ်ကို စမ်းမိတာတဲ့။ အလုံးက မမြင်ရပါဘူး။ လက်နဲ့စမ်းကြည့်မှ သိတာပါ။ လည်ပင်းအကျိတ် ဟုတ်-မဟုတ် ဆိုတာလည်း မသိပါဘူးဆရာ၊ လူကပိန်ရင် လည်ပင်းက အရိုးကြီးပေါ်နေတယ်လေနော်။ အဲဒီ ပေါ်နေတဲ့ အရိုးနဲ့ ကပ်ရဲ့အပေါ်ဘက် လည်ပင်းချိုင့်နေတဲ့ နေရာမှာ ရှိတယ်။ အလုံးက (ညာဘက်မှာပါ)။ နာလည်း မနာဘူးတဲ့။ ဆေးခန်းလည်း မသွားရသေးပါဘူး။ ဆေးခန်းမှာ ဓါတ်မှန်ရိုက်ပြီး၊ သေသေချာချာ စမ်းသပ်ကြည့်ရမှာပေါ့နော် ဆရာ၊။
A: စိတ်မပူနဲ့ ပြောပေးပါ။
သူ့အသက် ဘယ်လောက်လဲ။ လည်ပင်းကြီးနဲ့ တခြားအလုံးနဲ့ ခွဲရအုံးမယ်။ အလုံးက ဘယ်နေရာမှာလဲ၊ ရှေ့ ညာဘက်တော့ သိရပြီ၊ အရိုးလို့ ရေးလိုက်တာက လည်ပင်း အလည်တည့်တည့် အထက်-အောက်တန်းရှိတဲ့ လေပြွန် အရိုးနုကို ဆိုလိုသလား။ အလုံးအရွယ်အစား (ဥပမာ ၁ လက္မ X ၁ လက္မ)၊ ပုံသဏ္ဌာန်၊ (လုံးဝိုင်း-ဘဲဥပုံ)၊ အပြော့-အမာ၊ (မာတယ်-တင်းတယ်-ပြော့တယ်)၊ တံတွေး အမြိုခိုင်းရင် အလုံးက အထက်-အောက်ရွေ့သလား။
နောက်ပြီး ပူးတွဲလက္ခဏာတွေ ဘာရှိသလဲ။ ရင်တုံသလား၊ မောတတ်သလား၊ စိတ်တိုတတ်သလား။ ဟောဟောဒိုင်းဒိုင်း လုပ်လေ့ ရှိသလား၊ အအေးကြိုက်-အပူကြောက်သလား။ ချောင်းဆိုးသလား။ မြိုရင်ခက်သလား။ အသက်ရှူခက်သလား။
ပြီးရင် ဘာလုပ်သင့်သလဲ အကြံပေးပါမယ်။ ဓါတ်ပုံရိုက်ပို့ရင်လည်း ကောင်းတယ်။ မျက်နှာမပါလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့ကတပုံ၊ ဘေးတိုက်တပုံ။